မဒေါင်းလုပ် Tools မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Tools မဆော့ဝဲ
CrystalDiskMark အပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် HDD (သို့) SSD ၏ read and write speed ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ CrystalDiskMark သည် disk စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာသည့် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင် HDD နှင့် SSD အမြန်နှုန်းကိုအလွန်သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းစွာတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အပလီကေးရှင်း၌ disk...
KMSpico ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးအခမဲ့ activate လုပ်ခြင်း၊ Office activation အစီအစဉ် KMSpico ကိုအဘယ်ကြောင့် download လုပ်သင့်သနည်း။ ၎င်းသည် Windows operating system နှင့် Office ပရိုဂရမ်များ၏အကန့်အသတ်မဲ့၊ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ Microsoft Windows operating system နဲ့ Microsoft Office program တွေကို activate...
Tencent Gaming Buddy ကို download လုပ်ပါ။ PUBG Mobile, Brawl Stars နှင့်အခြားလူကြိုက်များသော Android ဂိမ်းများကို PC တွင်ကစားပါ။ Clash of Clans၊ Call of Duty မိုဘိုင်း၊ Garena အခမဲ့မီး၊ မြေအောက်ရိုင်းလှန်ခြင်း၊ Apex Legends၊ GTA (Grand Theft Auto), Legends of Legends, My Talking Tom...
မင်းကွန်ပျူတာထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲလို့မင်းသံသယရှိရင်ဒီအစိတ်အပိုင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရယူနိုင်တဲ့အခမဲ့စနစ်အချက်အလက်ပြသတဲ့အစီအစဉ်ပါ။ ဤကိရိယာဖြင့်မင်းကွန်ပျူတာရဲ့ RAM (ပရိုဂရမ်) အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပုံစံသတင်းအချက်အလက် (Intel၊ AMD, Celeron သို့မဟုတ် Pentium)၊ ကွန်ပျူတာမှာ RAM ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ မင်းရဲ့ hard disk...
Advanced SystemCare ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းအားဖြင့်၊ သင့်တွင်ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်တင်မှုတို့တွင်အအောင်မြင်ဆုံးသောပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်သောစနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိလိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့် SystemCare ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ Advanced SystemCare သည်သင်၏ကွန်ပြူတာများတွင်အခမဲ့...
PC Repair Tool (Outbyte PC Repair) သည် ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်စနစ်သန့်ရှင်းရေး၊ အရှိန်နှင့်ကာကွယ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ PC Repair Tool သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော PC repair programs များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာရှိနှေးကွေးသောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးရုံသာမကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုပါကာကွယ်ပေးသည်။ သင်၏ system...
Clean Master ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Clean Master သည်အခမဲ့ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ Clean Master၊ ဖိုင်ပြုပြင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်မွမ်းမံခြင်း၊ ကျန်ရှိသောဖိုင်များအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖိုင်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများကိုလုံးဝဖျက်ခြင်း၊ ဘရောက်ဇာအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဒရိုင်ဘာကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်း fix...
ယနေ့ Winrar သည်ဖိုင်အမျိုးအစားချုံ့ခြင်းအစီအစဉ်များထဲတွင်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အပြည့်စုံဆုံးပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်အမျိုးအစားများစွာကိုပံ့ပိုးပေးသော program သည်၎င်း၏လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုတို့ဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူသည်။ ZIP နှင့် RAR ပုံစံများကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်အပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးသော Winrar ၏...
Visual Studio 2015၊ 2017 နှင့် 2019 အတွက် Microsoft Visual C ++ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်သည့်အစုံသည်ပရိုဂရမ်များ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကား သုံး၍ ရေးထားသည့်ဂိမ်းများကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုများတွင်လိုအပ်သောစာကြည့်တိုက်များပါရှိသည်။ အထုပ်၏အင်္ဂလိပ်အမည်မှာမတူညီသောဗားရှင်း ၂...
VLC Media Player သည်ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူများအကြားလူသိများသောအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုပြcomputersနာမရှိဘဲကစားနိုင်ရန်အတွက်အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ VLC Player - အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်ကို Download လုပ်ပါ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖိုင် extension အားလုံးနီးပါးကိုထောက်ပံ့သည် VLC...
Wise Driver Care သည် Windows ဗားရှင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခမဲ့ driver updater program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Wise Driver Care သည်ယာဉ်မောင်းများနှင့်စက်ပစ္စည်း ၆၀၀၀၀၀ ကျော်၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုပံ့ပိုးပေးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ update များကိုလျင်မြန်စွာ scan ဖတ်ပြီးအလိုအလျောက် update ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Wise Driver Care သည် AMD, NVIDIA, ASUS, Dell,...
Recuva ဟာကွန်ပျူတာထဲကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုသူအများဆုံးအထောက်အကူပေးတဲ့အခမဲ့ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးပရိုဂရမ်တခုဖြစ်တယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအတွက် EaseUS Data Recovery ကိုချက်ချင်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ ၁၇ နှစ်ကြာလေထုထဲ၌ရောက်ရှိနေသော EaseUS Data Recovery Wizard သည် Recuva...
7-Zip သည်အခမဲ့နှင့်အစွမ်းထက်သော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည် hard drive များသို့မဟုတ် decompress ဖိုင်များတွင်ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုချုံ့နိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင်ဖိုင်ချုံ့ခြင်းပရိုဂရမ်များများစွာရှိသော်လည်း 7-Zip...
Unlocker ဖြင့် ဖျက်၍ မရနိုင်သောဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုဖျက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာရှိဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုဖျက်ရန်သင်ကြိုးစားသောအခါ ဤပရိုဂရမ်သည်ဖိုင်တွဲ (သို့) ဖိုင်သည်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုတွင်ဖွင့်ထားသောကြောင့်လုပ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖိုလ်ဒါကိုပိတ်ပြီးထပ်မံကြိုးစားပါ” စသည်)...
Screen Color Picker သည်သင်၏ desktop ပေါ်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရောင်အတွက်မဆို RGB, HSB နှင့် HEX အရောင်ကုဒ်များကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်သောအလွန်အသုံးဝင်။ ထိရောက်သောအရောင်ကုဒ်ဖမ်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော program ကို run ပြီးနောက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ mouse...
IObit Unlocker သည်သေးငယ်သောအသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဖျက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းဖျက်ရန်မလိုအပ်သောသင်၏ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အမှားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖယ်ရှားပစ်သောပရိုဂရမ်သည် ဖိုင်ကို ဖျက်၍ မရပါ”၊ ဝင်ရောက်ခွင့်ငြင်းပယ်ခြင်း”၊ ဤဖိုင်သည်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုနေသည်” ဖြစ်သည်။ ...
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition သည်အသုံးပြုသူများအားဖျက်ထားသောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကူညီပေးသောဖိုင်ဆယ်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုသုံးနေစဉ်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကိုမတော်တဆဖျက်မိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် recycle bin မှ recycle bin...
Microsoft Visual C ++ 2005 ဆိုသည်မှာ application များ၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည့် Microsoft ၏ Visual C ++ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားနှင့်အတူလိုအပ်သော Visual C ++ စာကြည့်တိုက်များကိုစုစည်းပေးသောအထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထုပ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable...
Registry Finder သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအကျိုးအတွက်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအခမဲ့ရိုးရှင်းပြီးအသုံးဝင်သော registry program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Windows operating system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောဤ program သည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသော registry တွင်သင်ရှာဖွေနေသောအရာကိုအလွယ်တကူရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတာကပရိုဂရမ်ကဖိုင်တွေကိုရှာတာထက်...
DirectX သည်ဆော့ဝဲလ်ကိုအထူးသဖြင့်ဂိမ်းများကိုသင်၏ဗွီဒီယိုနှင့်အသံ hardware နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အစိတ်အပိုင်းများအစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ DirectX ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုသောဂိမ်းများသည်သင်၏ hardware တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် multimedia accelerator features ကိုအသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် DirectX ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော...
Bandizip သည်အလွန်မြန်သော၊ ပေါ့ပါးပြီးလွတ်လပ်သောမော်ကွန်းတိုက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိ Winrar, Winzip နှင့် 7zip ဖိုင်များကိုလူကြိုက်များသောဖိုင်ချုံ့ခြင်းပရိုဂရမ်များအတွက်သင်အစားထိုးနိုင်သည်။ လူကြိုက်များသော compression အမျိုးအစားများအားလုံးအတွက်ပေးဆောင်ရသောပြိုင်ဘက်များနှင့်များစွာကိုအထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့် Bandizip...
HWiNFO64 ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များရယူရန်ခွင့်ပြုသည့်စနစ်သတင်းအချက်အလက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရက်ရောသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် HWiNFO64 သည်သင်၏ system ၏ hardware...
Hidden Disk သည်ဖိုင်လ်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုဝှက်ရန် Windows PC သုံးသူအဖြစ်သုံးနိုင်သော virtual disk ဖန်တီးခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် encrypt လုပ်ထားသော virtual disk တွင်အခြားမည်သူ့ကိုမျှမမြင်စေလိုသောသင်၏ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုသိုလှောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ Windows အသုံးပြုသူတိုင်းနီးပါးသူတို့ဖျောက်ချင်တဲ့ဖိုင် (သို့)...
မျိုးဆက်သစ်အင်တာနက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ခိုင်မာသည့်အုတ်မြစ်ချရန်တီထွင်ခဲ့သော .NET Framework4နှင့်အရည်အသွေးမြင့် application များကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဗားရှင်းအသစ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များကိုပံ့ပိုးခြင်း၊...
Cemu - Wii U emulator သည်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Wii U ဂိမ်းများကိုကစားလိုလျှင်သုံးနိုင်သည်။ သင်အခမဲ့အပြည့်အဝဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သုံးနိုင်သည့်ဤ Wii U ဂိမ်းစက်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ hardware စွမ်းအားကို အသုံးချ၍ သင်၏ Wii U ဂိမ်းများကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Wii U ဂိမ်းများဖြစ်သော Legend of the Zelda: Breath of the Wild, Super Mario...
တစ်ခါတစ်ရံမှာမင်းအလုပ်၊ မိသားစုနဲ့မင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်ဖျက်ပစ်နိုင်တယ်။ Windows မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်နေရင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရင်ကောင်းပါပြီ၊ ငါတို့အမှိုက်ပုံးထဲရောက်တဲ့အထိဒေတာတွေကိုပြန်ဆယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် USB stick, external disk (သို့) rewritable optical...
Windows 11 သည် Microsoft မှမျိုးဆက်သစ် Windows အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သော operating system အသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows ကွန်ပျူတာတစ်ခုတွင် Android အက်ပ်များဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးလည်ပတ်ခြင်း၊ Microsoft Teams သို့အပ်ဒိတ်များ၊ Start menu နှင့်သန့်ရှင်းပြီး Mac ကဲ့သို့ဒီဇိုင်းများပါ ၀ င်သောအသွင်သစ်များစွာပါ ၀ င်သည်။ Windows 11 ISO file ကို download...
CPUCores :: Maximize Your FPS isagame acceleration program that can solve your game acceleration if your computer is low performance games with high graphics ။ CPUCores :: Steam တွင်သုံးသော game performance booster သည်သင်၏ FPS ကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်၊ သင်၏ Windows operating system နှင့် Windows services များသည်သင်၏ processor...
SuperRam သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် memory (RAM) ကိုစောင့်ကြည့်စီမံနိုင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ် optimization tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးသည်သင်၏ hardware ကိုမည်သည့်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှမပြုလုပ်ဘဲရိုးရှင်းလွယ်ကူသော interface ဖြင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည့်ဤအစီအစဉ်သည်အခြား memory modification program များစွာထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။...
EaseUS System GoBack Free သည်သင်၏ Windows လည်ပတ်မှုစနစ်ဗားရှင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းတို့အတွက်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သောအခမဲ့အရန်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကျေနပ်သောသုံးစွဲသူများသည်အသစ်ထွက်ရှိလာသော Windows 10 ကို install လုပ်ပြီးနောက် Windows 8 သို့7သို့အလွယ်တကူပြန်နိုင်စေသော program သည်သင်၏ system...
CPUBalance သည်သေးငယ်။ ထိရောက်သောဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်၌လည်ပတ်နေသောပရိုဂရမ်များကိုနောက်ကွယ်မှလည်ပတ်စေပြီး system ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးပြသနိုင်သည်၊ သင်၏စနစ်၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားလုံးကိုသင်သတိပြုမိသည်။ အသုံးဝင်သော software တစ်ခုဖြစ်သော CPUBalance Pro ကို Bitsum မှထုတ်လွှတ်သော system response time...
NIUBI Partition Editor သည်အမြန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံး disk partitioning program တစ်ခုဖြစ်သည်။ partition အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း၊ အခန်းကဏ္ conversion ပြောင်းလဲခြင်း၊ disk ပုံတူပွားခြင်း၊ defragmentation၊ disk အမှားများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသော hard disk partition program ကို Windows PCs နှင့် server...
WhatsApp ကို Android မှ iPhone သို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည်သင်ထင်သလောက်မခက်ခဲပါ။ သင်၏ WhatsApp စာများနှင့် chats များကို Android ဖုန်းမှ iPhone သို့လွှဲပြောင်းရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသော၊ လွယ်ကူသော၊ လွယ်ကူသော၊ စိတ်ချရသောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် Backuptrans Android WhatsApp ကို iPhone Transfer သို့အကြံပေးလိုသည်။ ယခုပရိုဂရမ်ကို download...
Tunngle သည်မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းကစားခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ p2p နှင့် VPN နည်းပညာများဖြင့်ဂိမ်းကစားသူများအားအကောင်းဆုံးနှင့်ဆန်းသစ်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ Tunngle သည်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကွန်ပျူတာကစားသမားများအား Local Network မှတဆင့်ဂိမ်းများကစားသကဲ့သို့အင်တာနက်၌အွန်လိုင်းကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ...
IObit SysInfo သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူသည့်စနစ်သတင်းအချက်အလက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုကွန်ပျူတာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ operating system, processor, motherboard, memory device, display, driver, network နှင့်အခြားကိရိယာများစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စနစ်၏လျှို့ဝှက်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖော်ပြသည်။...
Wise Care 365 ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၏ registry settings, disk နှင့်အခြား system tools များကိုအထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ရန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဆောင်သော program တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်သိသိသာသာတိုးတက်စေရန်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသော program ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ Wise Care 365 ကို download လုပ်ပါ...
.NET Framework 3.5 သည် .NET Framework 3.0 ဗားရှင်းတွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) နှင့် Windows CardSpace တို့တွင် feature များပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် .NET Framework 3.5...
သင်၏ iOS ကိရိယာများကိုသုံးနေစဉ်တစ်ခါတစ်ရံမတော်တဆမှုများသည်သင်နှင့်သင့်အရေးကြီးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်ခါတစ်ရံမတော်တဆဖျက်မိခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ system ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဤအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရပါက EaseUS MobiSaver...